Opera umculi Vedernikov Aleksandr Filippovich: Biography, izici amaqiniso zokudala futhi ezithakazelisayo
Opera umculi Alexander Vedernikov kuyinto evelele oyiculayo Arias (bass), uthisha kanye ilunga eliqavile lalokhu okulandelayo Academy of folk.
Alexander wazalwa ngo-December 1927 edolobhaneni Mokin (Kirov Region). Abazali bakhe baba Philip S. no-Anna D., ngubani, ngaphandle kwakhe, amadodana amane.
Vedernikov umkhaya omkhulu wahlala loMfula uhlobo clan Vyatka River. Wonke amadoda akwa-umndeni babehilelekile yokukhiqiza of amakalishi. Ukusebenza ngokuzikhandla, bafeza oda amakhasimende amaningi futhi zaveza ukuthutha ka ngezinhloso ezehlukene: ukusukela kumsebenzi kuya phambili. Zonke amacala ngensimbi, ababazi, Joiners futhi saddlers wenziwa ngilabafowethu abahlanu noyise, uFiliphu. Ingxenye ebalulekile ye ukusebenza inqubo yokuba ukucula edonsela abantu bendawo bevela nxazonke.
Ngokushesha Vedernikov kwadingeka ukuba bathuthele Kopeysk edolobheni, lapho uyise waba umbazi. Khona-ke waya esikoleni sokufundela amakhono, iziqu kahle ubungcweti Umakhi. Wakhangwa ukuze kwakhiwe izindlu futhi izakhiwo yezimayini. Umama ka-Alexander waya izifundo ubuhlengikazi, bese isikhathi eside besebenza kulesi okukhethekile.
Ukuqalekela ubuhle wabonakaliswa Alexander kusukela zisencane. Wakuthanda ukupenda nokuhlabelela. isifiso Izingane ezishisayo sika eyajabula ngayo isipho ngesimo violin, kodwa uyise wamnika balalaika futhi iqoqo imidwebo. Ngo-1943, u-Alexander waqala ukufunda ekolishi Korkinskom entabeni. Lapho lesi sikole kwaba club ukuthi uye wahlanganisa intsha abanamakhono komuzi. Kuwo wonke amaqembu amateur Vedernikov Alexander Filippovich wakhetha ezobuciko, behlose kamuva abe ilungu choir. Nokho, leliphupho akuzange kube njalo: Nakuba ukulalela le nsizwa kuphazamisekile ngokuthi aphule izwi lakhe.
Ekupheleni lesikhungo Vedernikov Alexander Philippovich laba yintaba master oqeqeshiwe. Luck wamomotheka ngaleso sikhathi, lapho efika ukwenzani art esikoleni. Bezama ukwenza art kunokuba umsebenzi okhethekile, wahlela ukuba abe umdwebi. Amacebo zishintshile abafana abancane kakhulu lapho ezwa ukuthi reception kwemibhalo iphelile. Akukho ukulahlekelwa, Vedernikov Alexander Filippovich wathatha ithuba futhi wazama ukuya umculo esikoleni, elise esingaphesheya komgwaqo.
Ngokuphelele wakwazi ukubhekana kangcono nale ukuhlolwa ukucula, elapha ukufunda. Khona-ke u-Alexander kwaba isitshudeni sase-Moscow Conservatory, futhi kamuva - isisebenzi yaseshashalazini ovelele. Ukuba ngo-1958 soloist we Bolshoi Theatre, umculi wahlala kubo kuze 1990.
Ingxenye yokuqeqeshwa kwaba enkulu bass internship e-Italy, pedagogue odumile womculo Barr.
Kuvele biography ezithakazelisayo. Alexander Vedernikov: umsebenzi isiqalo
I ngokucacile futhi ubunjalo Alexander kukhona ikhono ezingavamile ukuvumelanisa umsindo okumangalisayo yezwi olwabo enhle. Umphakathi kanye nochwepheshe kusukela ukusebenza lokuqala kakhulu bathunjwa nobuciko bakhe futhi isipho yokuphindukuzalwa. Kwakubonakala kuye ukuzwana ubuntu ezintathu nje: umlingisi, umdwebi kanye umculi.
Uhlu izindima wenziwa Vedernikov ngesikhathi umsebenzi yaseshashalazini, iyamangalisa: wayekhethwe kubulawa cishe wonke amaqembu esihamba phambili ezihlobene repertoire bass (Russian opera zakudala yesimanje).
imisebenzi Musical Alexander Vedernikov
Ukusebenza yaseshashalazini, u-Alexander kuhlanganiswe imisebenzi yakhe kunabaculi sasivumela njalo futhi amakhonsathi, amakhonsathi eziningi Philharmonic futhi ukuqopha CD. I repertoire of the umculi wenza zothando, iculo, Arias futhi oratorios ezifana bomculo abadumile njengoba D. Shostakovch, Rimsky-Korsakov, D. Kabalevsky nezinye abalobi abaningi basekhaya nabamazwe angaphandle.
Indima ebaluleke kunazo zonke e-career umculi lingelayo umqambi Georgy Sviridov, ngokubambisana neNhlangano okuyinto Vedernikov Aleksandr Filippovich uye waqaphela inani elikhulu ezincwadini zasendulo. Ecwebezelayo kakhulu kubhekwa umjikelezo zezingoma eziyisishiyagalolunye, ogxile izinkondlo by R. Burns. Ukubulawa lezi usebenza Vedernikov usise okungavamile ukugqama, ifilosofi, iqiniso namandla, ekufezeni imiva okungavamile.
Imiklomelo kanye ukuhlukanisa
Georgiem Sviridovym yalotshwa "Oratorio Pathetique" kuyi-Vladimir Mayakovsky, futhi samuntu isithombe imbongi, ngaphandle kokungabaza, ziye zaba ngomunye wemikhakha mlando ebaluleke kakhulu umsebenzi wokudala, okuyinto eyenziwa, u-Alexander Vedernikov. Izimpumelelo ku amakhono esiphezulu beziphawuleka - umculi waklonyeliswa ngendondo igolide futhi umklomelo Ye-Competition International Berlin. Kungokufanayo - ngo-1956, imakwe ngoba Alexander abaphakanyiselwe umklomelo wokuqala Zonke-Union mncintiswano.
Ngaphezu kwalezi imiklomelo, u-Alexander Vedernikov, inani lamalungu akhona Russian Academy of Music kanye Ubuciko, futhi eneziqu eziningi, ukuhlukanisa kanye nemiklomelo, okuyinto kwanikezelwa kuye ezinsukwini zeSoviet Union.
Njengoba onguchwepheshe umculo kanye yaseshashalazini, umculi kuyinto ngumxhumanisi ku vocals. Phakathi abafundi bakhe kukhona inqwaba soloists we Bolshoi Theatre.
Ukuhlanganisa imisebenzi zokusebenza nokufundisa, umculi uthola isikhathi izingxoxo eziningi, kanye iqhaza kumaphrojekthi eziningi ithelevishini njengesivakashi.
Isipho kwezifiso omuhle ekushumayeleni avulekile ngaphandle vulgarity ukuzidla - yilokhu okwenza sikhumbuleke futhi ohlonishwa Alexander Philippovich Vedernikov. Umlando wakhe kuyohlale kuntula uma ngingenaye Ukukhuluma ithalente umdwebi sika. Pron lo msebenzi kukho konke ukuphila kwakhe, lo mculi kudala yobuciko on ngendwangu, ekuthumbeni ekumeni ubuso abathandekayo yabathandekayo babo. Alexander ayazise isikhathi esichithwa ngokwemvelo. Omunye izindlela zakhe ozithandayo lokuzijabulisa iminyaka eminingi namanje ngokudoba, kodwa futhi uheha umsebenzi ensimini kanye in the imibhede.
Cishe mathathu eyanikelwa bakubo cottage ku osebeni Vyatka uyisiphephelo ethokomele kusukela befuna komuzi ukuze oculayo nomkhaya wakhe.
Umlando soMthethosisekelo. amaphuzu asemqoka
Imfundo e-UK: 8 emikhosini ezithakazelisayo namasiko izikole IsiZulu
Indlela imbewu isithombo kahle
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Marienbad (Czech Republic): izithombe kanye nokubuyekeza
NoMnyango wezoLimo amadolo: izimbangela, izimpawu emazingeni ahlukahlukeneko wendlela yokwelapha
Kanjani ukwakha inethiwekhi phakathi kwamakhompyutha yakho ekhaya?